कोरोनाबाट बच्न सुनको मास्क बनाएर लगाउने शंकर को हुन् ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाबाट बच्न सुनको मास्क बनाएर लगाउने शंकर को हुन् ?
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको महामारीका बीचमा केही रोचक घटनाहर पनि भइरहेका छन् । केही रोचक तस्वीरहरु सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन् । यही बीचमा अहिले सामाजिक संजालमा सुनको मास्क लगाएका एक व्यक्तिको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ ।
समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार यी व्यक्ति महाराष्ट्रका शंकर कुराडे हुन् । उनलाई गोल्डेन म्यान भनेर पनि चिनिन्छ । सुनका गहना लगाउन सौखिन शंकरले सामान्य समयमा पनि करिब ३ किलो सुनका गहना लगाएर हिँड्छन् ।
विराटनगरका पाँच महिलासहित सात जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि